मङ्सिर ३० गते पशुपतिमा क्षमा पूजा गरिने – AB Sansar
December 9, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on मङ्सिर ३० गते पशुपतिमा क्षमा पूजा गरिने
मन्दिर छिर्ने भक्तजनलाई ढोकामा बस्ने सुरक्षाकर्मीले स्यानेटाइजर लगाएर पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । भक्तजनलाई दुई मिटरको दूरीमा राख्ने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ । करिब नौ महिनापछि मन्दिर खोल्दा एकैपटक भक्तजनको भीड लाग्न सक्ने भएकाले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नेपाल प्रहरीलाई अनुरोधसहित सुरक्षाको विषयलाई लिएर बैठकसमेत गरिएको कोषले जनाएको छ । (रासस)
आज बजारमा घटयो सुनको मूल्य , हेर्नुहोस् कति मा हुँदैछ कारोबार !
के भयो उमालाई? माइत आइन् अनि यस्तो अवस्थामा भेटियो शव
September 6, 2021 Ab-संसार
July 25, 2021 santosh